Uyithenga phi iGPS-iGeofumadas
Ikhaya/Geospatial - GIS/Apho ukuthenga i-GPS
Geospatial - GISGPS / Izixhobo
Apho ukuthenga i-GPS
Ndihlala ndibuzwa ukuba yeyiphi ivenkile endicebisa ukuba ithengwe izixhobo zeGPS. Impendulo yokuqala yile: fumana umhambisi wasekhaya kwilizwe lakho, ukuba ngaba uthenga into ekhethekileyo kwaye ufuna ingcebiso.
Kodwa ukuba sele sele ucacile malunga nento ofuna ukuyithenga kwaye yinto eyona nto ufunayo yintengo ephantsi, mhlawumbi umboneleli wendawo akayi kuba ngowonaqoqosho. Ngokuxhomekeke ekubeni unakho ukhuphiswano okwaneleyo ungayigcina ixabiso.
Inketho yokuthenga i-Intanethi ayiyonto engalunganga, namhlanje zikhona izixhobo ezininzi zokuthenga ngokuthe ngqo nomthengisi e-United States, ngexabiso elifanelekileyo kunye nesiqinisekiso.
Umzekelo wale nto IGiger GPS, enika izibonelelo ezifana ne:
Iintsuku ze-30 iwaranti. Ngaphandle kwewaranti yomenzi oqhelekileyo, iTiger GPS ibonelela ngesiqinisekiso sokubuyiselwa imali kwiintsuku ezingama-30.
Isiqinisekiso esincinci sexabiso. Baqinisekisa ukuba xa ufumana ixabiso elisezantsi, nokuba ungaliphi na, banokuphucula.
Iinkalo ezahlukeneyo kunye neemodeli. Kuyenzeka ukuba ufumane i-Garmin, Magellan, Tomtom, Delorme, izixhobo ze-Lowrance, phakathi kwabanye. Kubandakanya izixhobo ezakhiwe ngokutsha, ukuba kunjalo, kubonisiwe kwimeko.
Ukuthumela naphi na kwihlabathi. Ukuhamba nge-UPS okanye i-FedEex, ukuba ithengiwe ngaphambi kwe-3PM ET, iodolo ithumela kwangolo suku.
Iindlela zokuhlawula. Ixhasa intlawulo usebenzisa ikhadi lekhredithi, kubandakanya iPaypal.
Ngoko, ukuba ufuna ukuthenga i-GPS, kwaye uyazi ukuba, enye into enomdla ukucaphula nge-Tiger GPS.
Yiya kwi-Tiger GPS
gvSIG 1.9 RC1, ilungele ukulanda
Iirobhothi zilapha ukuhlala
Silvio Herrera uthi:
Ndifuna ukwazi ixabiso le
eMiami, eU.SA. Ukuba bekukho isibonelelo ndingathanda ukuyiqonda.
Kulo venkile le-intanethi lincinci kakhulu kwaye ukuthunyelwa kukhululekile
http://licafashion.com , inkonzo yamakhasimende nayo intle kakhulu
Ukuba kukho nabani na unomdla kule webhusayithi ngokungezelela ekuthengiseni i-GPS kwi-intanethi, iikhosi zamahhala zenziwa ngexesha lokuthenga kwaye zihlala ixesha elide njengoko ufuna. Unokucela enye?
josep maria uthi:
Intsha ye-website ye-GPS, enokuthi wenze imali kunye nenkqubo yokubambisana, ukuba unomdla wokuthintana nathi,
PS: Andifumananga ifom yoqhagamshelwano
Unomdla kakhulu kwaye kuya kuba kubalulekile ukuquka ezinye i-GPS ukuphononongwa ukuze ube nolwazi olungakumbi malunga nezixhobo.
Iingcebiso ezi-4 zokuphumelela kwi-Twitter-Top40 Geospatial kaSeptemba 2015
Zama iKanban Tool (https://kanbantool.com/es) kum kubonakala ngathi...
Ikhosi yokuprinta i-3D isebenzisa iCura
Le yikhosi yokwazisa kwizixhobo zeSolidWorks kunye nobuchule bokumodareyitha. Iya kukunika into eqinileyo ...
Ukudalwa kweemodeli ze-BIM zokufakwa kombhobho Oko uza kufunda Sebenza ngokubambisana kwiiprojekthi ezininzi zoqeqesho ezibandakanya ...